Uchapupu: I akaponeswa sei
Rimwe zuva ndakaziva kuti Ishe wamuka zvirokwazvo uye weNobel weKarivari.
Ishe vaiziva kuti Aizotora ini. He nditendere kuverenga uye kunzwisisa kuitwa nesayenzi. Rimwe zuva ndakaziva kuti Ishe wamuka zvirokwazvo uye weNobel weKarivari.
Ambuya akandipa pauduku kutenda, asi hatina kumbobvira akaenda kuchechi. Kusimbiswa Zvinoshamisa, asi ndakanga ndisina kunaka. Ndakaverenga imwe dzidziso, asi virrade.
Chokwadi rakapinda Benzi rangu, uye ndakabhabhatidzwa. VaKristu vaiva muguta akabatsira zvikuru. Nalen nomuduku yakanga chivara.
Zvakaita kuti yakakamukana imba, zvaigona kuitwa kana chiwepu tsinga kubva kuruboshwe, asi kuti hama dzakawanda vakaponeswa. Kusuruvara uye mufaro. Rumutsiriro anouya nokusuruvara uye nomufaro, sezvo mufundisi Pentecostal akati sezvo akarara ava kutandadza.
Ishe haatori isu saizvozvo, nekuti tine zvinodiwa zvakasiyana. Chris anoimba akanaka nziyo akwegura uye kutaura mwoyo. Vamwe vaparidzi vanotaura Shoko raMwari rechokwadi. Vamwe pagers kudzidza Bhaibheri kuzviita. Vamwe, akafanana neni, vanofanira nedudziro akawanda wehurukuro nesayenzi.
Ishe kubvira pasi kana anoshanda. My nevamwe 'pauduku akanga yakaipisisa pamwe kurohwa uye nenhamo. A zvazvainge. Ishe akanzwa remukomana apo Ismail akakandwa pasi pegwenzi.
Vose vana nezvizvarwa zvevazukuru vaKristu, asi kwaiva nevaKristu vakatendeka mhuri yangu muna 1800s. Seven vafundisi Baptist vakaenda United States uye mumwe akafa somumishinari muna Congo.
Ipapo akatora nguva itsva pamusoro. Zvino Ishe akapindira kuti isu aizouya zvakanaka.
Izvi uchapupu uye muverengi mail. mafungiro angu ndivo munyori.